चरम विवादमा फस्दै कांग्रेस ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार चरम विवादमा फस्दै कांग्रेस !
चरम विवादमा फस्दै कांग्रेस !
२०७५, २५ फाल्गुन शनिबार ०८:३९
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चरम विवादमा फस्दै गएको छ । महासमिति बैठकको भावना विपरीत संस्थापन पक्षले बहुमतको बलमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान पारित गराएपछि विवाद बढेको हो । एकलौटी गरिएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले सभापति देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।
माघ १० बाट जारी केन्द्रीय समिति बैठकले फागुन १२ गते बहुमतका आधारमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान पारित गरेको थियो । संस्थापन इतर समूह भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सबै तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्ने पक्षमा थियो । महासमिति बैठकको निर्देश विपरित केन्द्रीय समितिले विधान पारित गरेपछि पौडेल र सिटौला समूहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे ।
फागनु १४ गतेको बैठकमा सभापति देउवाले एकलौटीरुपमा अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनको तयारी गरेपछि इतर समूहले बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक चैत पहिलो साता बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेका कारण आफू अनुकूलका निर्णय गराउन सभापति देउवालाई सहज छ ।
जुन सहजतालाई इतर समूहले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्न नसक्दा विवाद बढ्ने, सेलाउने भइरहन्छ । संस्थापन पक्षले हरेक विषयमा पेलेरै जाने नीति लिएपछि पौडेल र सिटौला समूह ‘चाक्सीबारी भेला’मार्फत प्रतिवाद गर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ । तर, कमजोर गणितीय संख्याका कारण दुवै समूहसँग छलफलबाटै समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।
संस्थापन पक्षले भने केही नेता नजिकिदो महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुल्ने स्वार्थमा लागेकाले पनि समस्या भएको बताउँछ । सभापति देउवा निकटका नेता पार्टी विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्नु पर्छ भन्नेहरु नै संस्थागत प्रबृत्तिविरुद्ध गएको, सामूहिक निर्णय आत्मसाथ गर्न नसकेको र हरेक संरचनामा भागवण्डा खोज्ने गलत अभ्यास प्रोत्साहित गर्न खोजिएको दावी गर्छन । पार्टीभित्र समूहगत स्वार्थ हावी गर्ने प्रबृत्तिको समाधान खोज्नुपर्ने संस्थापन पक्षको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफुलाई केन्द्रमा राखेर सभापतिसँग स्वार्थगत ‘बार्गेनिङ’ गरेको त्यसलाई कृष्णप्रसाद सिटौलाले साथ दिएको संस्थापन पक्षको आरोप छ । दुवै पक्ष महाधिवेशन केन्द्रित भएकाले समस्या समाधानभन्दा बढाएर कार्यकर्ता तानातान गर्ने दाउमा छन् । जसका लागि आफ्ना गुटका नेताको उचित व्यवस्थापन दुवै पक्षको ऐजेण्डा हो । नीति, सिद्धान्त, विचार र संगठनका लागि भन्दा कांग्रेसको यो लडाई समूहगत व्यवस्थापनका लागि हो ।
Previous articleसीके-सरकार सहमति : सीकेकाे नियतमाथि शंका कायमै, ‘जनअभिमत’ भाेलि गलपासाे बन्ने हाे कि ?
Next articleबुवा बिते आमा जेल गइन्, छाेरा छारीको बिचल्ली